Awusamukelwa umculo olethwa ngeCD oKhozini
CHARLES KHUZWAYO | May 18, 2020
KUMISIWE ukulethwa nokuthunyelwa kwamaCD emsakazweni ohamba phambili e-Afrika futhi olele isibili emhlabeni jikelele, Ukhozi FM, ngenxa yezingqinamba zeCOVID-19.
Omunye wababhekene nomsebenzi wokuhlunga izingoma kulo msakazo, uZanda Mthembu, uthe izinkinga ezidalwe yigciwane leCorona ziholele ekutheni bangabe besakwazi ukuthatha amaCD. Ekhuluma oKhozini, uZanda uthe umtapo womculo wabo awusasebenzi. "Yingakho sizithola sesisebenzisa ama-email kakhulu, okuyiyona ndlela yokuthi basifakele (ngayo) umculo. Umculo uma uwuthumela oKhozini, sike sicele ukuba uwuthumele [email protected]"
Uthe uma sewuthumela ingoma nge-email uyenza ibe i-attachment futhi kwi-format eyiMP3 noma i-Wav ngoba abayithathi eyinye indlela, enjenge-ACC noma iMP4.
"Kufanele uqinisekise ukuthi lapho uqopha khona bayakushintshela ingoma, i-format yayo ibe iMP3 noma i-Wav. Uzoyifaka leyo ngoma yakho kwi-email bese emzimbeni we-email uyabhala, uyacacisa ukuthi ingoma ekasibanibani, isihloko sengoma sithini, umqambi wengoma (composer) usibanibani nosibanibani, uphrojusa noma i-publisher yakhona iqhamukaphi."
Uthe abaculi bezingoma zesintu bavamise ukusebenzisa ama-ISRC Code. "Kahlekahle, igenge eningi yomculo wesintu (ayiyisebenzisi i-ISRC Code). Kulungile asinankinga nalokho, ungasinikeza imininingwane yakho yakwaSamro, usinikeze inombolo yakho yakwaSamro bese usifakela abakubiza nge-catelogue number. Bayazi abaculi, iCD neCD inenombolo ebhalwayo ekhoneni lakhona, iqala ngeCD bese kuba izinhlamvu ezimbili nezintathu, okuchaza ukuthi iCD ekasibanibani, uma imali iphuma iyakusibanibani. Yilokhu esike sikucele kubaculi bomculo wesintu." UZanda uthe uma umculi enayo i-ISRC Code engabanikeza.
"Uma i-ISRC Code uyithola kaRisa, iyinto esuke izohambisana nabantu abaningi abafuna ukubona ukuthi amaCD adayisa kangakanani ezitolo nanokuthi uma uzongena kulento ebizwa nge-radio monitor, ukubheka ukuthi umculo wakho udlala kuziphi iziteshi futhi udlala kanjani, uzobe sewusebenzisa i-ISRC Code." Unxuse abaculi abangenayo i-ISRC Code ukuba bengazixaki ngayo ngoba basuke bezosebenzisa okujwayelekile njengegama lomculi, ele-publisher, catalogue number, imininingwane yakwaSamro nenkampani aqopha ngaphansi kwayo.
Uthe uyacela abaculi baqikelele ukuthi bathumela izingoma zabo ngendlela ukuze bagweme ukuchithwa kwezingoma zabo. Okunye akuvezile ukuthi abaculi besintu bavamise ukuqopha izingoma ezeqile emizuzwini emine nemizuzwana engamashumi amathathu (4.30 seconds). "Uma yeqile, alikho iphutha, sike sizinqamulele thina ngoba siyakwazi ukuzinqamulela kodwa okunye sike sikudedele kuzingenele emoyeni kunjalo ngoba siyawuqonda umculo wesintu ukuthi usebenza kanjani.
Kodwa uma kuwukuthi uyakwazi ukuzinqamulela wena ingoma lapho usuke uqopha khona, benganqamulela bona, asinankinga ngalokho." Ubuye waveza ukuthi abawuthathi usayizi ongaphezu kuka-5MB ngoba abezobuchwepheshe bakwaSABC babuye bangawavumeli ama-email anosayizi omkhulu kunalona.
Uthe izinto ezisemqoka okufanele abaculi bengazikhohlwa yi-catelogue number nemininingwane yeSamro.
"Ngaphandle kwalezi zinombolo ezimbili awukwazi ukudlalwa emsakazweni ngoba kufanele sikuholele imali yakho, asikwazi ukusebenzisa into yakho ngoba uSABC uthi into edlalwayo kufanele ikhokhelwe."
Esephetha unxuse abaculi babekezele ngenxa yokuthi ama-email asebewatholile angaphezu kuka-17 000 kodwa basuke bezigcina bewaphendulile amaciko nge-email uma sebezilalele izingoma zawo.